Ngaba ukutya okune-detox kuyasebenza ngokwenene? | IBezzia
UPau Heidemeyer | 07/04/2021 23:55 | Ukutya, ZeMpilo
Zininzi iindlela zokutya ngaphakathi kwilizwe lesondlo, nganye nganye icacile ukufezekisa injongo eyahlukileyo: ukunciphisa umzimba, ukwandisa ubunzima bomzimba, ukuphucula impilo yentliziyo, okanye ukutya okune-fat okanye isodium.
Kwelinye icala, kukho ukutya okune-detox okunandiphayo ukubuyekeza. Zilungele ukucoca umzimba kwaye zihlala zinabalandeli abaninzi, kubandakanya abadumileyo.
Phambi kokuqala ukutya, kubalulekile ukuba sizazi iinjongo esifuna ukuzifezekisa, kwaye kule meko, kufuneka sazi ubungozi obunokubakho bokutya esifuna ukukuqala.
Zininzi izidlo zedetox, ezinye ziyilelwe ngokusela kwiziselo, amayeza okanye ezinye ukuzila ukutya, kunye nokungenisa iinxalenye ezincinci zemifuno kunye neziqhamo, kunye nezongezo ezithile.
Ukutya okukhupha umzimba emzimbeni, kukuvumela ukuba ulandele isicwangciso esingqongqo sokunciphisa umzimba ngokukhawuleza, inceda ukucoca umzimba weekhemikhali eziyityhefu, kunye nako nakuphi na ukugqitha.
Xa sithetha ngokuthomalalisa umzimba, sizama ukuba umzimba wethu uphelise iityhefu eziye zaqokelelwa emva kokutya kakhulu ukutya okucutshungulwayo kunye nazo zonke izinto ezingcolisayo esingqongileyo esele sikwazi ukuzicola.
1 Ukutya okune-detox konke okufuneka uyazi
1.1 Izifundo kunye nokutya okune-detox
1.2 Isiseko sokutya okune-detox
2 Zisebenza njani izidlo zedetox
3 Nika ingqalelo kukutya okune-detox
4 Yitya impilo kwaye umzimba wakho uya kuyenza yonke le nto
Ukutya okune-detox konke okufuneka uyazi
Kuya kufuneka sazi iziphumo ebezingalindelekanga ezinokubangelwa lolu hlobo lokutya okune-detox. Kufuneka kukhunjulwe ukuba olu hlobo lokutya lukhuthaza ukutya ukutya kwendalo, kwaye zibandakanya amanzi amaninzi kunye nemifuno, izinto ezilungele impilo yakho.
Njengokunye ukutya okuninzi, ukutya okune-detox kunokuba neziphumo ebezingalindelekanga eziyingozi ekufuneka sizazi ngaphambi kokuzisebenzisa.
Izifundo kunye nokutya okune-detox
Okwangoku akukho zifundo zininzi ezibonisa ukusebenza kwayo, kuba kukho abantu abaluthandayo olu hlobo lokutya kuba besithi iityhefu azisoloko zishiya umzimba ngokwendalo kwaye zifuna ukonyuswa ukunceda ukucoca umzimba.
Aba bantu bayayijonga indlela iityhefu ezihlala ngayo iinkqubo zokwetyisa, zesisu, kunye nee-lymphaticnakwisikhumba neenwele kwaye kunokubangela ukudinwa, intloko ebuhlungu kunye nesicaphucaphu.
Ngokuchasene noko, kukho abantu abathi iityhefu zisuswe ngokwendalo kwaye akukho mfuneko yokuba ulandele ukutya okungqongqo ukuze ukufezekise oko.
Isiseko sokutya okune-detox
Umbono osisiseko emva kokutya okune-detox kukuyeka iintlobo ezithile zokutya ezinokuba neetyhefu zexesha elithile. Umbono kukucoca nokucoca umzimba wayo yonke into "embi." Nangona kunjalo, inyani kukuba umzimba womntu uyilelwe ngeendlela zawo zokukhupha ukungasebenzi emzimbeni.
Zisebenza njani izidlo zedetox
Njengoko besitshilo, akukho kuphela idetox yokutya enye, ziyahluka phakathi kwazo kwaye uninzi lwazo lufuna ixesha lokuzila, Oko kukuthi, yeka ukutya iintsuku ezimbalwa kwaye ngokuthe ngcembe ukwazisa kwaye ngokuthe ngcembe iintlobo ezithile zokutya ekutyeni.
Ukutya okuninzi okuninzi kuphakamisa ukunkcenkceshela kwe-colonic okanye i-enema "ukucoca" ikholoni. Olunye uhlobo lokutya lucebisa ukuthatha izongezo okanye iintlobo ezithile zeti ukunceda kwinkqubo yokuhlanjululwa komzimba.
Ukutya okune-detox kunokuthintela kwaye kunyange nezifo ukunika abantu amandla ngakumbi okanye ukugxila. Ukuba nomzimba ogcwele ukutya "okunetyhefu" kuya kusenza sidinwe, sicothe kwaye sinentloko ebuhlungu.
Kubalulekile ukuba nokutya okunamafutha asezantsi kunye nefayibha ephezulu, ngaloo ndlela kugcinwa ukutya okusempilweni kunye nokunika amandla ngakumbi kwabo bakulandelayo.
Nangona kunjalo, njengoko besilindele ngaphambili, ubungqina besayensi buyasilela ukuba oku kutya kunceda umzimba ukuphelisa ityhefu ngokukhawuleza okanye ukupheliswa kwetyhefu, nangona kungakhe khathaze ukulandela ukutya okuvumela umzimba ukuba uthathe ikhefu.
Nika ingqalelo kukutya okune-detox
Abantu abaninzi bakholelwa ukuba ukuba batya ukutya okune-detox baya kuphulukana nobunzima obuninzi, kodwa oku akuyonyani ngokupheleleyo kwaye Izikhokelo ezithile kufuneka zithathelwe ingqalelo ukuze ungazibeki emngciphekweni, kuba ukuba ukutya okungqongqo kakhulu kuyenziwa, ezi zinokuthatha umthwalo wazo.
Ukutya okune-detox akufanelekanga kubantu abanezifo ezithile. Ngale ndlela, akukhuthazwa abantu abanesifo seswekile, isifo sentliziyo kunye nezinye iimeko zonyango ezinganyangekiyo. Ukuba ukhulelwe okanye uneengxaki zokutya, kufuneka uziphephe ezi ndlela zokutya.
Ukutya okune-detox kunokuba ngumlutha. Kungenxa yokuba ukunqongophala kokutya okanye ukulawulwa kwe-enema kudala imvakalelo eyahlukileyo kwaye mhlawumbi nabantu abaninzi bayayithanda. Kwabanye abantu, ukhuthazo olufana nolo luvakala nge-nicotine okanye utywala luthanda ukuziva.
Izongezo zokukhupha umzimba emzimbeni zinokuba neziphumo ebezingalindelekanga. Uninzi lwezincedisi ezisetyenziswe ngexesha lokutya okune-detox zezona zilusizo, zibangela abantu abane "jam" ukuba baye kwigumbi lokuhlambela ngakumbi. Oku kunokuba nefuthe elibi kwimpilo, kuba izongezo ze-laxative ezingamayeza zinokubangela ukomisa, ukungalingani kwamaminerali kunye neengxaki kwinkqubo yokwetyisa.
Ukutya okune-detox kuyilelwe ukufezekisa iinjongo ezithile zexesha elifutshane. Inokubangela ezinye iingxaki zempilo, ukuzila ukutya ixesha elide kunokucothisa imetabolism yomntu. Oku kwenza ukuba kube lula ukuphinda ufumane ubunzima obulahlekileyo kwaye kubenzima kakhulu ukunciphisa umzimba kwixesha elizayo.
Yitya impilo kwaye umzimba wakho uya kuyenza yonke le nto
Ukutya iziqhamo kunye nemifuno sisiseko sendlela yokuphila esempilweni. Ungalibali ukuzithatha, iziqhamo zonyaka, imifuno kunye nemicu, kunye nokusela amanzi ngakumbi. Kodwa kwakhona, kufuneka uqiniseke ukuba ufumana zonke izondlo ozifunayo kwezinye ukutya.
Iiproteni akufuneki zisilele nokuba, kunye neevithamini okanye iiminerals ekufuneka zifunyenwe kwimithombo eyahlukeneyo. Eyona nto ibaluleke kakhulu ekutyeni okusempilweni yahlukile kwaye ayigqithi, kuba nokuba ukutya kunokuba sempilweni kangakanani na, ukuba kuthathwe kakhulu, kungasibangela umonakalo omkhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Ukutya » Ngaba ukutya okune-detox kuyasebenza ngokwenene?
I-Uterqüe iveza iA la Fresca, indlu yayo entsha yokupapasha ye-SS21